Ulwakhiwo - iZhongshan City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
I-6072 Magnetic Silent Mortise Lock
Umgama weziko 72mm
Cwangcisa ngasemva 60mm
Ukuvavanywa komjikelo Amaxesha angama-200,000
Inombolo yamaqhosha 3 amaqhosha
Imigangatho Umgangatho we-EURO
Ingxolo: Ngesiqhelo: ngaphezulu kwe-60 decibel; I-YALIS: Malunga ne-45 decibel.
1. Ityala elinokutshintshwa, elenza ukuba ufakelo luchane ngakumbi kwaye linciphise ubunzima bokufaka.
2. I-L-shape eyakhelweyo eyakhelweyo ukuqinisekisa ukuba ulwalathiso lwesiqwenga sokutyhala luyahambelana nolwalathiso lwebholiti, ukuze ukusebenza kwebhawudi kugudle ngakumbi.
3. Iibhasikithi ezithuleyo zibekwa phakathi komthombo webhalethi kunye nebhotile kwaye kwimeko yoqhankqalazo ukunciphisa ingxolo eveliswa lilokishi yokubulala ngexesha lokusebenza.
4. I-bolt igutyungelwe ngumaleko wenayiloni ukunciphisa ukungqubana kunye nokwenza ukuthula ngakumbi.
Ngawaphi amanqaku entlungu asonjululwe yiYALIS Magnetic Mortise Lock?
1. Uyilo lolwakhiwo lomzimba wokutshixa kwimarike luyinkimbinkimbi kwaye intshukumo ye-bolt ayihambi kakuhle. Ke ngoko, ukuxhathisa xa isiphatho somnyango sicinezelwe phantsi kukhulu, kukhokelela kubomi benkonzo emfutshane yesiphatho somnyango.
2. Indawo yokufakwa kwetyala logwayimbo kwintengiso lilungisiwe kwaye alinakho ukuhlengahlengiswa ngokuguqukayo, okwandisa ubunzima bokufakwa.
3. Xa uninzi lwezitshixo ezithe cwaka kwimarike zisebenza, ukutyibilika kwe-bolt akukuhle kakhulu, kwaye isandi sokungqubana phakathi kwezinto zokutshixa izinto zivakala kakhulu, nto leyo inciphisa kakhulu isiphumo sokuthula.
I-5mm ye-Ultra-thin Rosette kunye neNkqubo yeNtwasahlobo
Uyilo lwendlela yasentwasahlobo yokuphatha i-rosette okwangoku kwimarike inzima kakhulu, itya izinto ezininzi ezingasetyenziswanga, kwaye ibukhali ngenkangeleko, engazifezekisiyo iimfuno zobuhle zamaqela abathengi. I-YALIS i-rosette ecekeceke ngokucekeceke kunye nendlela yasentwasahlobo yenziwe nge-zinc alloy enobunzima be-5mm kuphela. Kukho intwasahlobo yokuseta kwakhona ngaphakathi, ecutha ilahleko yomzimba wokutshixa xa isibambo sicinezelwe, kwaye akukho lula ukuxhoma emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
1. Ubungqindilili besiphatho se-rosette buncitshisiwe baba yi-5mm kuphela, ethe chu ngakumbi kwaye ilula.
2. Kukho intwasahlobo ebuya ngendlela enye ngaphakathi kulwakhiwo, enokunciphisa ilahleko yomzimba wokutshixa xa isiphatho somnyango sicinezelwe, ukuze isiphatho somnyango sicinezelwe phantsi kwaye isiphatho somnyango siphinde saseta ngokutyibilikayo, kwaye akukho lula ukuxhoma.
3.Umda ophindwe kabini ulwakhiwo lwendawo: Ubume bendawo emiselweyo buqinisekisa ukuba i-engile yokujikeleza kwesiphatho somnyango inomda, eyandisa ngempumelelo ubomi benkonzo yesiphatho somnyango.
4. Isakhiwo senziwe nge-alloy zinc, enobunzima obuphezulu kwaye inqanda ukuguqulwa.
Ulwakhiwo oluncinci kunye neRosette kunye neEscutcheon
Kule mihla, uyilo lwangaphakathi oluphezulu luyathandwa ngokudityaniswa komnyango kunye nodonga, kungoko iingcango eziphakamileyo ezinje ngeengcango ezingabonakaliyo kunye neengcango eziphakamileyo zelilanga ziye zavela. Kwaye olu hlobo locango oluncinci luthathela ingqalelo ukudityaniswa komnyango kunye nodonga ukomeleza ukubonwa ngokubanzi. Ke ngoko, i-YALIS iphuhlise indlela encinci yasentwasahlobo kunye nekhithi yokunyusa ukunciphisa ubungakanani be rosette kunye neesutcheon. Ngokuzinzisa indlela yasentwasahlobo kunye nekhithi yokufaka emngxunyeni womnyango, irosette kunye neesutcheon zigcinwa zikwinqanaba elifanayo nomnyango kunye nodonga kangangoko kunokwenzeka. Ingakumbi kwifom yokubonisa yokudityaniswa komnyango kunye nodonga.
Ukuze kuhlangatyezwane nemarike yokuhamba kweengcango zeglasi zeslim, kunye nokufaka inqwaba yeminyango yokuthengisa eshushu eveliswe nguYALIS kule minyaka ili-10 idlulileyo yokubhabha iingcango zeglasi, u-YALIS wasungula iglasi. Isiphatho seglasi yibhulorho phakathi komnyango weglasi kunye nesiphatho somnyango weglasi, kwaye inokuhlangabezana neemfuno zabathengi abahlukeneyo ngobungakanani beesakhelo zomnyango ezi-3 ezahlukeneyo. Iglasi splint inokutshatiswa nayo yonke iminyango yeYALIS. Kukho iziqwenga zerabha kwisiqwenga sokuthintela ukutyibilika. Uyilo olulula kunye nefomu yokuyila izisa isitayile esahlukileyo kumakhaya alula.